Ndị agadi - princetoncovid.org
Otu Njikọ Aka nke Obodo Ọchịchị Princeton, Obodo nke Princeton na clọ Akwụkwọ Ọha na Princeton.
Mmelite nke obodo
Iwu na aro ugbu a
Nye ma ọ bụ Nweta Enyemaka
Initiative Buddy Initiative - Ndị ọrụ afọ ofufo dị njikere inyere ụmụ amaala Princeton aka. Ozi ndi ozo Ebe a. Iji jikota Buddy agbataobi ga-enyere gị aka, biko debanye aha gị Ebe a.
Nkata Virtual Fireside - Nzukọ nzukọ izu ụka na 2 pm Drop-in iji soro ndị enyi ọhụrụ kparịta ụka site na kọmputa, smartphone ma ọ bụ ekwentị. Deba aha Ebe a.
Ezinụlọ Ezinụlọ & Childrenmụaka nke Greater Mercer County
Ekwentị “iji wee banye,” M, W, F, 609-987-8100, ext 0; mmemme nkwado siri ike mebere, 609-987-8100, ext. 117 ma ọ bụ email; ndụmọdụ onye ọ bụla, ịnabata ọgwụ ọgwụ, ọgwụ, ndị a na-enwetaghị mkpuchi na mkpuchi mkpuchi onwe ha (nkwụnye ụgwọ a hapụrụ n'oge nsogbu), 609-987-8100, gbakwunye 102. Oge Mbata, Otu Nkwado na Ọrụ Ndị Onwe dị na Spanish na ndị ndụmọdụ na-asụ asụsụ abụọ.
Gọvanọ ahụ nyere iwu nchịkwa nke kwere ka ndị dọkịta lara ezumike nká ma ọ bụ ndị si mba ọzọ sonye na ọgụ megide COVID-19. Iwu a nyere ha mgbochi maka ọrụ obodo maka ezi okwukwe na ịnye nlekọta COVID-19. Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike idebanye aha ha Ebe a. Ekpuchighi n'okpuru iwu, mana achoro ya bu umu akwukwo n'afọ gara aga nke omumu ogwu.